China igwe anaghị agba nchara manifold emepụta na soplaya |Xinfan
Akwụkwọ ikike: afọ 2 Nọmba nlereanya: XF26015A
Aha ika: ỤFLY Okwu: Igwe anaghị agba nchara
Ebe amụrụ: Zhejiang, China Agba: Ọkpụkpọ pọmpụ nickel plated
Ngwa: Ụlọ MOQ: 1 set n'ala kpo oku manifold
Ụdị imewe: Oge a Nha: 1,1-1/4”,2-12ỤZỌ
Aha ngwaahịa: Ihe nrụnye SS Pipe Manifold na mita mmiri na valvụ igbapu
Ike Ngwọta Brass Project: Eserese eserese, imewe ụdị 3D, ngụkọta maka oru ngo, mkpokọta ngalaba Cross
A na-ejikarị ihe igwe anaghị agba nchara eme ihe na pipeline.Alaka ọtụtụ ụzọ bụ tumadi ihe ọla kọpa.The n'ozuzu bọọlụ valvụ bụ a ọla kọpa bọl valvụ, nke kewara ụzọ 2, 3 ụzọ,...12 ụzọ,... Etc., Ọ ọtụtụ-eji na-ewu oyi na-ekpo ọkụ mmiri mmiri usoro, n'ala kpo oku ọkpọkọ usoro, ikuku. usoro ọkpọkọ oyi, wdg ...
The ojiji nke igwe anaghị agba nchara manifold: igwe anaghị agba nchara mmiri separator, it`s tumadi mere nke igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ, abụọ ọdụ ụgbọ mmiri nke ọkpọkọ na-emechi, na e nwere otutu mmiri outlets na ọkpọkọ, n'ozuzu 2 oghere, 3 oghere, 4 oghere. , 5 oghere, 6 oghere, 7 oghere ... 12 oghere, mmiri outlets nke ndị a igwe anaghị agba nchara mmiri separators nwere threaded njikọ ụdị, mkpakọ njikọ ụdị, mgbanaka mgbali njikọ ụdị, na ịgbado ọkụ ụdị.A na-eji ihe nkesa mmiri igwe anaghị agba nchara mee ihe n'ọtụtụ oge, dịka oge ndị a na-ahụkarị:
1.Water pipeline na-eji ebe ndị mmadụ na-eme ihe, dị ka okporo ụzọ, ogige ntụrụndụ.
2.High-end ebe obibi, a na-etinye ọkpọkọ mmiri ọha na eze n'èzí ma jiri ya mee ihe mgbe a na-eji igwe anaghị agba nchara dochie ya.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ 3.Hotels, njikwa mmiri na-ejikọta ọnụ n'èzí ụlọ.
4.Hospitals, n'èzí jikọtara mmiri na-ahụ maka nlekọta.
Nke gara aga: Bras manifold
Osote: SS Manifold na mita mmiri na valvụ igbapu
Brass forging manifold maka kpo oku ala